Hevitra MPANOHARIANA | Aogositra 2007
jioi 2007: faly ihany na dia...
2007-08-15 @ 08:04 in Spaoro
Hatezerana ny hasosorana ny an'ny mpitia baolina fandaka raha tsy nitoko fa nanao ady sahala ny ekipam-pirenentsika ny alahady teo. Ny tena nahakamo moa dia ilay tsy nahatafiditra baolina mihitsy no sady tsy nisy tifitra afa-tsy ny an'i Eric Faneva indray mandeha ihany. Tsy nahagaga loatra raha nitehaka avy hatrany ny olona rehefa nanao tifitra maromaro ny Mahorey tamin'ny lalao faharoa.
Omaly ary dia efa somary nalaindaina ihany ny mpijery ny hamonjy an'i Mahamasina nefa tonga ihany sy feno rehefa tonga ny lalao faharoa nandraisan'i Madagasikara anjara. Nampihomehy ahy ihany fa any amin'ny vavahady atsimo avokoa ny olona no milahatra fa manahy sao tsy misokatra ny vavahady avaratra (anoloan'ny vavahadin'ny ste famille). Noho izanny dia izaho no nilahatra voalohany sy tafiditra voalohany tao amin'ny kianjaben'i Mahamasina tamin'ny mpijery tsotra.
Rehefa nanomboka tokoa ary ny baolina ka efa hitan'ny mpilalao fa tifitra no tena andrasan'ny mpijery ary ny baolina miditra no fantany dia nanandrana tamin'ny tifi-davitra ihany na dia mivilambilana matetika eny aza. Tsy nahitam-bokany mihitsy io ny fidirana voalohany fa nivaly kosa tany amin'ny fidirana faharoa.
Minitra fahaefatra dia nahazo penalty (2° mi-temps) ny malagasy saingy tsy tafiditry Mamy (21) izany. Nandresy 3 noho ny aotra ihany anefa isika avy eo ka i Voavy paulin ny roa voalohany ary i Claudio kosa ny iray farany. Nody amin-kafaliana ny mpijery satria tafakatra antsasaky ny famaranana ihany ny malagasy.